Lin Kabar Construction Co.,Ltd – CityHall
Linkabar Construction Company Limited was founded in 2005. Linkabar’s services are the construction of buildings, the construction of electrical power lines, buildingapower substation, construction of roads and bridges, concrete pillars, build factories and concrete pillars production operations in Yangon.
လင်းကမ္ဘာ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမီတက်အား ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပြီး အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓါတ်အားခွဲ ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း။ လမ်းတံတားများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင်စက်ရုံများတည်ဆောက်ပေးခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ အလုံမြို့ နယ်၊ အမှတ် (၇) စံပယ်လမ်းတွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်၍ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
လင်းကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီ လက်အောက်ရှိ လင်းကမ္ဘာ ကွန်ကရစ် လုပ်ငန်းအား ၂၀၀၇ ခုနှစ် တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လှေလှော်အင်းကျေးရွာ၊ ရန်ကုန်- မန္တလေးအမြန်လမ်း (၁၅မိုင် – ၄ဖာလုံ)တွင် စက်ရုံတည်ဆောက်ကာ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံးတို့ သို့ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်များ ပေးသွင်းခဲ့ပါသည်
Location: No (7), Sabal St., Saw Yan Paing (West), Alone Township, Yangon.
Phone: 09 511 5535